“အချစ်ကို ဥပေက္ခာ မပြုပါနဲ့” – ရှအေလငျး
ဟိုတုန်းက သူ့ချစ်သူကို သိပ်ချစ်ပြီး သိပ် ဂရုစိုက်တတ်တဲ့ ကောင်မလေး တစ်ယောက် ရှိတယ်…
ကောင်မလေး ဂရုစိုက်သလောက် ကောင်လေးကတော့ အဖက် မလုပ်ခဲ့ပါဘူး….
ကောင်လေး ဘာတွေလုပ်လုပ် ဘယ်လိုဘဲသူ့ကို ဆက်ဆံပါစေ ခွင့်လွှတ်ပြီး ဘေးနားမှာ ရှိနေခဲ့တယ်….
ကောင်မလေး message ပို့တိုင်း ကောင်လေးကဘယ်တော့မှ အရေးတစ်ယူ ပြန်ပို့တယ် မရှိခဲ့ဘူး….
ကောင်မလေး ph ဆက်တိုင်း ဘယ်တော့မှ အလေးထား ပြီး ပြန်မပြောခဲ့ဘူး….
ကောင်မလေး တစ်ခုခုလိုက်ပို့ဖို့ ပူဆာတိုင်း ဘယ်တော့မှ ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ မရှိခဲ့ဘူး…..
ကောင်မလေးနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ မွေးနေ့ ချစ်သူများနေ့ နှစ်ပတ်လည်နေ့ သူ့အတွက် ဘယ်တော့မှ ဆုတောင်း မပေးခဲ့ဘူး…..
ကောင်မလေး online မှာ စာပို့တိုင်း ဘယ်တော့မှ reply မပြန်ခဲ့ဘူး…..
ကောင်မလေးရဲ့ Fb စာမျက်နှာမှာ သူ့အတွက် နေရာရှိခဲ့ ပေမယ့် သူ့စာမျက်နှာတွေမှာတော့ ကောင်မလေးအတွက် နေရာ မရှိခဲ့ဘူး……
ကောင်မလေးနဲ့ အပေါင်းအသင်းတွေ ယှဉ်လာတိုင်း ဘယ်တော့မှ သူ့ကောင်မလေးကို မျက်နှာသာမပေးခဲ့ဘူး….
တစ်ဖြည်းဖြည်း ရက်ကိုလစား လကိုနှစ်စား အချိန်တွေ ကုန်လာခဲ့ပြီ….ကောင်မလေး စိတ်ထဲ ဒဏ်ရာ သေးသေးလေးတွေကနေ တစ်ဖြည်းဖြည်း ကြီးမားလာခဲ့တယ်…
သူ့အတွေးထဲ ကောင်လေး သူ့ကို ချစ်တယ် ဆိုတာ ဝေဝါးလာခဲ့တယ်… သူ့ရင်ဖတ်ထဲ မေးခွန်းတွေ ထုတ်လာခဲ့တယ်..
သူ အဖြေတစ်ခု ရခဲ့တယ်… ကောင်လေး သူ့ကို မချစ်ဘူး.. ဟုတ်တယ်… သူ အရမ်း ငိုခဲ့တယ်….
ပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုကို ပြတ်သားစွာ ချလိုက်တယ်။ သူ့အတွက်ဆို အချိန် မပေးနိုင်တဲ့ ကောင်လေး….
သူ့အတွက်ဆို မကြည်ဖြူနိူင်တဲ့ ကောင်လေး… သူ့အတွက်ဆို အရေး မပေးနိုင်တဲ့ ကောင်လေး…
ကောင်လေး သူ့ကြောင့် မပျော်ရွှင်နိုင်ရတာတွေ… ကောင်လေး သူ့ကြောင့် စိတ်ရှုပ်နေရတာတွေ အတွက်….
သူ ကောင်လေး ဘေးနားက ထာဝရ ပျောက် ကွယ်သွားဖို့…..
တစ်နေ့မှာ…. ကောင်လေးဆီကို နေ့တိုင်း ပို့နေတဲ့ message တွေ ရောက်မလာခဲ့တော့ဘူး…..
ကောင်လေးဆီကို နေ့တိုင်း ဆက်နေတဲ့ ph no လေး မဝင်လာခဲ့တော့ဘူး…..
ကောင်လေးလည်း တစ်ရက်နှစ်ရက် အေးဆေးပါဘဲ… တစ်ပတ်လောက်လည်း ကြာလာရော သူတစ်ခုခု လိုအပ်နေသလို ခံစားလာရတယ်…
သူစဉ်းစားလာတယ် ကောင်မလေး ဘာလို့ ဖုန်းမဆက်တာလဲ… နောက်တော့ သူဖုန်းဆက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး ကောင်မလေးဖုန်းကို သူဆက်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ သူ့ကိုပြန်ပြောတယ်…
“လူကြီးမင်း ခေါ်ဆိုသော တယ်လီဖုန်းမှာ တပ်ဆင်ထားခြင်း မရှိသေးပါရှင်”…. တဲ့..
အဲ့ဒီကတည်းက ကောင်လေးကို သိပ်ချစ်ခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးဟာ ကောင်လေး ဘေးနားက ထာဝရ ပျောက်ကွယ် သွားခဲ့တယ်….
တစ်ကယ်တော့ ကောင်လေးက ကောင်မလေးကို သိပ်ချစ်ပါတယ်… ဒါပေမယ့် ကောင်မလေးက သူ့ကိုသိပ်ချစ်တော့ သူ့အနားက မထွက်သွားဘူး ဆိုပြီး ဂရုမစိုက်ခဲ့တာပါ…
ကောင်လေးဟာ နောင်တတွေ တစ်လှေကြီးနဲ့ ကောင်မလေး ပြန်လာမယ့်နေ့ကို စောင့်နေခဲ့ပါတော့တယ်….
တစ်ကယ်တော့ အချစ်ဆိုတာ အသွားအပြန်ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်… သူက ငါ့ကိုချစ်တာဘဲ… ငါဆိုးလို့ရတယ်… ငါ သူ့ကို ဂရုမစိုက်လို့ရတယ်.. ဆိုပြီး မတွေးလိုက်ပါနဲ့..
လူဆိုတာ ခံနိုင်ရည် ကုန်ဆုံးတဲ့အခါမှာ ဘယ်လောက်ဘဲ ချစ်ချစ် လွတ်ချထားချင် ခဲ့ကြတယ်….
ဒါကြောင့် ကိုယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ လက်တွဲဖော်ကို ကိုယ့်ဘေးနားက ထာဝရ ရှိနေစေဖို့ အပြန်အလှန် ဂရုစိုက်ပါ.. ကြင်နာပါ… ဖေးမပါ… ဥပေက္ခာ မပြုပါနဲ့…
မိန်းကလေး ဆိုတာ ကိုယ့်လက်တွဲဖော်က ကိုယ့်ကို အလေးထားတာကို လိုချင်တယ်.. ကိုယ့်ကို ဦးစားပေးတာကို လိုချင်တယ်..
သင့် ရင်ထဲမှာ ချစ်နေတာကို ထုတ်မပြဘဲ မြင်နေရအောင် နားလည်နေရအောင် မိန်းမဆိုတာ အကြားအမြင် ရနေတဲ့ သူတွေမဟုတ်ပါဘူး….
credit : Tameelay.com
ဟိုတုနျးက သူ့ခဈြသူကို သိပျခဈြပွီး သိပျ ဂရုစိုကျတတျတဲ့ ကောငျမလေး တဈယောကျ ရှိတယျ…
ကောငျမလေး ဂရုစိုကျသလောကျ ကောငျလေးကတော့ အဖကျ မလုပျခဲ့ပါဘူး….
ကောငျလေး ဘာတှလေုပျလုပျ ဘယျလိုဘဲသူ့ကို ဆကျဆံပါစေ ခှငျ့လှတျပွီး ဘေးနားမှာ ရှိနခေဲ့တယျ….
ကောငျမလေး message ပို့တိုငျး ကောငျလေးကဘယျတော့မှ အရေးတဈယူ ပွနျပို့တယျ မရှိခဲ့ဘူး….
ကောငျမလေး ph ဆကျတိုငျး ဘယျတော့မှ အလေးထား ပွီး ပွနျမပွောခဲ့ဘူး….
ကောငျမလေး တဈခုခုလိုကျပို့ဖို့ ပူဆာတိုငျး ဘယျတော့မှ ကွညျကွညျဖွူဖွူ မရှိခဲ့ဘူး…..
ကောငျမလေးနဲ့ ပတျသကျတာတှေ မှေးနေ့ ခဈြသူမြားနေ့ နှဈပတျလညျနေ့ သူ့အတှကျ ဘယျတော့မှ ဆုတောငျး မပေးခဲ့ဘူး…..
ကောငျမလေး online မှာ စာပို့တိုငျး ဘယျတော့မှ reply မပွနျခဲ့ဘူး…..
ကောငျမလေးရဲ့ Fb စာမကျြနှာမှာ သူ့အတှကျ နရောရှိခဲ့ ပမေယျ့ သူ့စာမကျြနှာတှမှောတော့ ကောငျမလေးအတှကျ နရော မရှိခဲ့ဘူး……
ကောငျမလေးနဲ့ အပေါငျးအသငျးတှေ ယှဉျလာတိုငျး ဘယျတော့မှ သူ့ကောငျမလေးကို မကျြနှာသာမပေးခဲ့ဘူး….
တဈဖွညျးဖွညျး ရကျကိုလစား လကိုနှဈစား အခြိနျတှေ ကုနျလာခဲ့ပွီ….ကောငျမလေး စိတျထဲ ဒဏျရာ သေးသေးလေးတှကေနေ တဈဖွညျးဖွညျး ကွီးမားလာခဲ့တယျ…
သူ့အတှေးထဲ ကောငျလေး သူ့ကို ခဈြတယျ ဆိုတာ ဝဝေါးလာခဲ့တယျ… သူ့ရငျဖတျထဲ မေးခှနျးတှေ ထုတျလာခဲ့တယျ..
သူ အဖွတေဈခု ရခဲ့တယျ… ကောငျလေး သူ့ကို မခဈြဘူး.. ဟုတျတယျ… သူ အရမျး ငိုခဲ့တယျ….
ပွီးတော့ ဆုံးဖွတျခကျြ တဈခုကို ပွတျသားစှာ ခလြိုကျတယျ။ သူ့အတှကျဆို အခြိနျ မပေးနိုငျတဲ့ ကောငျလေး….
သူ့အတှကျဆို မကွညျဖွူနိူငျတဲ့ ကောငျလေး… သူ့အတှကျဆို အရေး မပေးနိုငျတဲ့ ကောငျလေး…
ကောငျလေး သူ့ကွောငျ့ မပြျောရှငျနိုငျရတာတှေ… ကောငျလေး သူ့ကွောငျ့ စိတျရှုပျနရေတာတှေ အတှကျ….
သူ ကောငျလေး ဘေးနားက ထာဝရ ပြောကျ ကှယျသှားဖို့…..
တဈနမှေ့ာ…. ကောငျလေးဆီကို နတေို့ငျး ပို့နတေဲ့ message တှေ ရောကျမလာခဲ့တော့ဘူး…..
ကောငျလေးဆီကို နတေို့ငျး ဆကျနတေဲ့ ph no လေး မဝငျလာခဲ့တော့ဘူး…..
ကောငျလေးလညျး တဈရကျနှဈရကျ အေးဆေးပါဘဲ… တဈပတျလောကျလညျး ကွာလာရော သူတဈခုခု လိုအပျနသေလို ခံစားလာရတယျ…
သူစဉျးစားလာတယျ ကောငျမလေး ဘာလို့ ဖုနျးမဆကျတာလဲ… နောကျတော့ သူဖုနျးဆကျဖို့ ဆုံးဖွတျပွီး ကောငျမလေးဖုနျးကို သူဆကျလိုကျတဲ့ အခြိနျမှာ သူ့ကိုပွနျပွောတယျ…
“လူကွီးမငျး ချေါဆိုသော တယျလီဖုနျးမှာ တပျဆငျထားခွငျး မရှိသေးပါရှငျ”…. တဲ့..
အဲ့ဒီကတညျးက ကောငျလေးကို သိပျခဈြခဲ့တဲ့ ကောငျမလေးဟာ ကောငျလေး ဘေးနားက ထာဝရ ပြောကျကှယျ သှားခဲ့တယျ….
တဈကယျတော့ ကောငျလေးက ကောငျမလေးကို သိပျခဈြပါတယျ… ဒါပမေယျ့ ကောငျမလေးက သူ့ကိုသိပျခဈြတော့ သူ့အနားက မထှကျသှားဘူး ဆိုပွီး ဂရုမစိုကျခဲ့တာပါ…
ကောငျလေးဟာ နောငျတတှေ တဈလှကွေီးနဲ့ ကောငျမလေး ပွနျလာမယျ့နကေို့ စောငျ့နခေဲ့ပါတော့တယျ….
တဈကယျတော့ အခဈြဆိုတာ အသှားအပွနျရှိဖို့ လိုအပျပါတယျ… သူက ငါ့ကိုခဈြတာဘဲ… ငါဆိုးလို့ရတယျ… ငါ သူ့ကို ဂရုမစိုကျလို့ရတယျ.. ဆိုပွီး မတှေးလိုကျပါနဲ့..
လူဆိုတာ ခံနိုငျရညျ ကုနျဆုံးတဲ့အခါမှာ ဘယျလောကျဘဲ ခဈြခဈြ လှတျခထြားခငျြ ခဲ့ကွတယျ….
ဒါကွောငျ့ ကိုယျရှေးခယျြထားတဲ့ လကျတှဲဖျောကို ကိုယျ့ဘေးနားက ထာဝရ ရှိနစေဖေို့ အပွနျအလှနျ ဂရုစိုကျပါ.. ကွငျနာပါ… ဖေးမပါ… ဥပက်ေခာ မပွုပါနဲ့…
မိနျးကလေး ဆိုတာ ကိုယျ့လကျတှဲဖျောက ကိုယျ့ကို အလေးထားတာကို လိုခငျြတယျ.. ကိုယျ့ကို ဦးစားပေးတာကို လိုခငျြတယျ..
သငျ့ ရငျထဲမှာ ခဈြနတောကို ထုတျမပွဘဲ မွငျနရေအောငျ နားလညျနရေအောငျ မိနျးမဆိုတာ အကွားအမွငျ ရနတေဲ့ သူတှမေဟုတျပါဘူး….
“မိဘနှစ်ပါးအတွက် ဂုဏ်ယူတယ်ဆိုတဲ့ တိုင်ရွန်”
“မိဘများ အထူးသတိထားကြပါ။ ကျောင်းမုန့်ဈေးတန်းမှာ ဝိုင်ဆိုပြီး ကလေးတွေကို ရောင်းနေတာတဲ့”
“Miss Universe စစ်ကိုင်း”မော်ဒယ်လ် အလှမယ် ယွန်းဆက်ပိုင် ကားအက်စီးဒန့်ဖြစ်ရခြင်း...
“တင်နေတဲ့ အကြွေးတွေကြေပြီး လာဒ်ရွှင်ငွေဝင် ငွေကြေး အခက်အခဲ ပြေလည်ဖို့...